A-Gaa - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ
ụdịdị dị iche iche School > Mụta + Discover > A-Flow
Na anyị Nkeji nke mbido Akara na mgbakwunye na agụmakwụkwọ izugbe, ị ga-arụ ọrụ na ntọala oru ngo n'ime STEM na Art & Culture. Nwekwara ike ịhọrọ site na nhọrọ modulu Media, Sports, Humanities, Expression, Economy and Science.
N'ime esiwe anyị na-elekwasị anya na Ngwá ọrụ 21th nke narị afọ. Taa, teknụzụ na-agbanwe ngwa ngwa karịa oge. STEM na-anọchi anya Science, Technology, Engineering and Mathematics. Anọ ndị a nwere njikọ chiri anya. Dị ka "dijitalụ dijitalụ" ị na-eme ihe ọmụma ọmụma, ihe okike, nkatọ & iche echiche nsogbu nsogbu, ntụgharị uche, na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ime Art & Omenala ị ga-amata otu agụmakwụkwọ sara mbara site na isiokwu ndị na-atọ ụtọ. Learn mụtara ịchọpụta ohere okike gị ma mepee ha. Ga-arụ ọrụ ihe ma na-eme ka ị mata ọdịbendị onwe gị site na nkà ọdịbendị dịgasị iche iche (nghọta, iche echiche, nyocha, echiche).
N’afọ nke abụọ A-iyi ị nwere ike ịhọrọ NKỌR O AH MODR MOD AS MODS MOD AKWERKWỌ - SAYENSES (pịa maka ozi zuru ezu)
Gaa ebe a na tebụl nke anyị Nkeji nke mbido Akara:
Ihe nkuzi 1A & 2A Nhọrọ isi - asụsụ nke oge a - sayensị (.pdf, 168 KB)
Ị ka na-amatabeghị ịdọ aka ná ntị ị chọrọ ịgbaso? Ịchọrọ ịchọta ụdị ọzụzụ dịgasị iche iche dị ka o kwere mee iji nwee ike ịme nhọrọ ziri ezi maka akara nrịgo 2? Mgbe ahụ, ntụziaka a nwere ike ịbụ ihe maka gị!
Ị gafeela afọ 2e? Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ụkpụrụ n'ụdị ọ bụla nke nrịgo 2e.
> Chọpụta ihe ọmụmụ 2e na ụlọ akwụkwọ anyị.
> Chọpụta ihe ọmụmụ niile 2e
Nwere ike ịnweta bọs 20 - bọs 21 - bọs 30 - bọs 34